Sounds that can't hear and Thoughts that can't see: ငါးထောင်တန်ဖုန်းအပေါ် ကျွန်တော့အမြင်( Tag Post )
Posted by Yin Sue at 3:19 AM
ချစ်စံအိမ် March 4, 2012 at 4:19 AM
သမီးစံ March 4, 2012 at 4:32 AM
Min Ayeik March 4, 2012 at 6:14 AM
ဖတ်ကောင်းကောင်းနဲ့ဖတ်နေတာ နောက်ဆုံး ရောင်စုံအခန်းငယ်ဆိုတာပါလာတော့မှပဲ မျက်လုံးပြူးသွားတော့တယ်
ချက်ချင်းပဲ ခေါင်းထဲအတွေးက ၀င်လာတယ် ဒါဟာ campaign သဘောမျိုးလား။
ဘယ်သူကစလုပ်တာလဲ ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့လဲ ဘလော့ဂါတွေကြား ကျယ်ပြန့်လာအောင်လုပ်တာလား လူထုကတော့ ဒီလိုပြောနေကြပါပြီဆိုပြီး တစ်စုံတစ်ယောက်ကို အကြပ်ကိုင်ချင်တာလား မေးခွန်းပေါင်းများစွာပေါ့ဗျာ
ကုမ္ပဏီကစနက်လား ဘယ်သူ့လက်ချက်လဲ ဆိုတာလဲ မေးချင်ပါရဲ့
ထားပါတော့လေ စလုပ်တဲ့သူကလွဲလို့ ဘယ်သူ့ဆီမှာ အဖြေရှိမှာလဲ
သူငယ်ချင်းရင်ဆူးရေ တက်ဂ်ပေးတော့မှလဲ ရေးရတော့မှာပေါ့လေ
သူငယ်ချင်းပို့စ်ထဲကမေးခွန်းတွေအတိုင်းပဲ ရေးပေးရမှာလား အဲဒါလေးတော့သိချင်တယ်
သူငယ်ချင်းရေ သူငယ်ချင်းအဖြေပေးပြီးရင်တော့ နည်းပညာအမြင်ဘက်ကနေ ချဉ်းကပ်ကြည့်ဖို့ ကြိုးစားပါ့မယ်
ငါ့မှ ရွေးတက်ဂ်ရသလားကွာ :P
အောင်အောင် March 4, 2012 at 8:02 AM
ရင်းဆူရေ....လာအားပေးသွားပါတယ် ဖတ်လို့အရမ်းကောင်းတယ်ကွာ နာ့ကိုဘီယာတိုက်...
cool emerald March 4, 2012 at 6:53 PM
".ပြည်တွင်းရော...နိုင်ငံခြားကောရော....အ၀င်ရော...အထွက်ရော...မက်ဆေ့ခ်ျရော အားလုံးအပြင် သင့်တင့်သော ဈေးနှုန်းနဲ့ စိတ်အေးချမ်းသာစွာ..ခေါ်နိုင်အောင် အရင်လုပ်သင့်သည်ဟု ထင်ပါသည်..."
အဲဒီ ဟာလေး အကြိုက်ဆုံးပဲ။ ဟုတ်တယ်... သုံးတဲ့သူတွေ ဆီကနေ ဆင်ကဒ်ဖိုး ခေါင်းစဉ် မတပ်လဲ တစ်ခြားခေါင်းစဉ် တပ်ပြီး နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ပိုက်ဆံ တောင်းလို့ ရတာပဲလေ... အဓိက က သင့်တဲ့ ကုန်ကျငွေနဲ့ အရည်အသွေး ကောင်းဖို့ အရေးကြီးပါတယ်.
အလွမ်းမြို့လေး March 7, 2012 at 2:16 PM
မကြီးတော့ လာဖတ်သွားတယ်။ တက်ဂ်တွေလည်း မြင်တော့ ရင်တုန်သွားတယ်။ အမလေး ဖုန်းအကြောင်း နားမလည်း တော့ခက်သားကွယ်။ တောသူဆိုတော့ ဖုန်းမပြောနဲ့ မီးတောင် ကောင်းကောင်း မြင်ဖူးဘူးကွဲ့။ မကြီးကတော့ စကားပြောတဲ့ဖုန်းတဲ့ အကြောင်းတော့ မသိဘူးကွဲ့။ ဖုန်းတွေနဲ့နောက်မှာ လိုက်လာမှာက (ဗုန်း.)ကိုတော့ မြင်သား။ ဘယ်သူတွေ (ဗုန်း) မလဲသာ မသိသေးတာ။